Caral, fizahan-tany arkeolojika ao Peroa | Vaovao momba ny dia
Caral, fizahan-tany arkeolojika any Peroa
Peru izy no firenena mahaliana indrindra, amin'ny fomba fijery arkeolojika, any Amerika atsimo. Manankarena tokoa ny kolontsaina ao aminy ary ho tianao raha tianao ny tantara sy ny arkeolojia. Hatsaran-tarehy.
Fotoana vitsy lasa izay dia niresaka momba an'i Huayna Picchu isika ary androany no anjaran'ilay Caral, iray amin'ireo tranokala arkeolojika izay tsy maintsy tsidihinao. 182 kilometatra monja miala an'i Lima, renivohitra Peroviana, ary afaka mandeha irery ianao na misoratra anarana amin'ny fitsidihana. Avelanay eto aminao ny safidy rehetra miampy ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao hahafantarana azy.
2 Tsidiho i Caral
3 Inona no ho hita ao amin'ny Caral
Ilay toerana arkeolojika dia eo akaikin'i Lima, ao amin'ny lohasaha Supe. Nilaza ny arkeology fa manana vitsivitsy izy io dimy arivo taona noho izany miaraka amin'izay dia io no tanàna tranainy indrindra amin'ny kaontinanta. Mazava ho azy fa nandinika izany ny UNESCO Toerana misy ny vakoka eran-tany.
Ny sarotra ny tempoly sy tranobe, ary tsy misy ny tsy ampy piramida, Izy io dia natsangan'ilay antsoina hoe Caral Civilisation izay araky ny filazan'ireo manampahaizana manokana dia teo anelanelan'ny 3 sy 1800 BC Niara-niasa tamin'ny sivilizasiona Sumer, India, Sina ary Egypt izy io. Andininy hafa tsy azo odian-tsy jerena raha dinihina ny fananganana piramida, sa tsy izany? Ary ny fanontaniana ny antony nananganana ireo rafitra ireo eran'izao tontolo izao dia miverina amin'ny herin'ny ...
Caral 23 kilaometatra monja avy eo amin'ny morontsirak'i Pasifika io ary azontsika atao ny mamantatra azy io amin'ny andian-tanàna amin'ny faritra iray ihany, a lohasaha maitso sy mahavokatra, misy havoana miaro azy. Misy tanàna valo fa i Caral no mahavariana indrindra. Tsy mampino ireo rava ireo fa tsy hita hatramin'ny taonjato faha-XNUMX, na angamba tsara kokoa, fa ny mpikaroka amerikana tavaratra sasany no hitan'izy ireo izy tamin'ny 1949.
43 taona lasa izay, nisy arkeology peroviana nanoratra ny rava fa tamin'ny 1979 vao nohadina ilay toerana ary nanomboka teo dia matotra ny fikarohana ireo rava. Miaraka amin'ny fiarahana amin'ny Carbon 14, dia nofaritan'ny arkeology fa 5 taona i Caral, ka noho izany ny fahalalana fa nanova ny zavatra rehetra noheverina momba ny sivilizasiôna amerikana. Mazava ho azy, mandraka androany dia tsy fantatra mazava ny antony nandao ny tanàna na satria nianjera ny sivilizasiôna.
Tsidiho i Caral
Ho an'i Caral afaka mandeha fiara, fitsidihana na fitateram-bahoaka ianao. Raha misafidy an'ity fomba farany ity ianao dia mila mandeha bus ao Lima mankany avaratra, mankany Supe, manodidina ny kilometatra 187 an'ny Panamericana Norte. Mialà eo amin'ny tsenan Supe ianao ary iray monja ny sakana avy eo amin'ny toerana anananao ny laharan'ny taxi izay mitondra anao mankany Caral. Azonao atao ny manamboatra azy haka anao amin'ny fotoana iray ary hanidy ny zava-drehetra.
Raha tsy izany dia afaka mandray fiara fitateram-bahoaka iray hafa ianao avy eo amin'ny toerana iray ihany izay mamela anao eo am-baravaran'ny sarotra, 20 minitra eo am-pandehanana. Amin'ny fiara ianao dia mandeha amin'ny lalan'ny Panamericana Norte hatramin'ny kilometatra 184, mialoha ny tanànan'i Supe, ary araho ireo famantarana izay mitondra anao mankany Caral. Ilay be pitsiny sokafana ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva fa hevero fa ny vondrona farany nahazo alàlana hiditra amin'ny 4. Ny tahan'ny 11 faladia Peroviana isaky ny olon-dehibe.
Notarihina ny fitsidihana, miandraikitra mpiasa sahaza azy, ary faladia vaovao 20 no omena ho an'ny vondrona misy olona 20. Amin'ny teny Espaniola na dia misy famantarana aza na amin'ny teny espaniola na anglisy. Kajy fa maharitra ny fitsangantsanganana ora sy sasany. Ireo vondrona izay niforona dia afaka miandry ny anjarany ao amin'ny Rection and Rest Area izay misy faritra fisakafoanana sy fandroana. Amin'ny faran'ny herinandro dia mivarotra ny vokariny ny mponina fa mandritra ny herinandro dia mora ny mitondra ny sakafonao sy ny ranoo.
Inona no ho hita ao amin'ny Caral
Ny tanàna masina natsangana teo ambony terraska izay niaro azy tamin'ny tsy fetezan'ny natiora ary ny tranony dia vita amin'ny hazo sy vato. Misy piramida enina amin'ny efamira feno sy boribory, ao amin'ny faritra iray ao 66 hektara zarazaraina ho faritra roa, ny peripheral sy ny afovoany.
Amin'ny faritra afovoany any toeram-ponenana sy tranom-panjakana, ny sasany hita eo amin'ny tapany ambony, any avaratra ary misy piramida sy efamira boribory roa eo alohan'izy ireo, miampy kianja iray, ary ny sasany any amin'ny antsasany ambany, atsimo, miaraka amin'ireo trano kely kokoa, alitara, amiteite ary trano. Ankoatr'izay, eo amin'ny sisin-tany no misy trano fonenana bebe kokoa. Toa ny piramida, samy hafa habe dia nolokoana mavo sy fotsy, indraindray mena. Manana tohatra eo afovoany izy ireo ary eo an-tampony dia misy efitrano maromaro.
Ny piramida lehibe indrindra dia 28 metatra ny haavony ary io no carte postale mahazatra an'i Caral. Ny iray hafa manana tionelina ambanin'ny tany ary misy lavaka fandoroana afo eo an-tampony, ny iray hafa 18 metatra ny haavony. Samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay. Ankoatra ny tranobe ny zavatra hitan'ny lamba, zavamaneno ary quipus dia zava-dehibe. Raha ny marina, tao amin'ny iray amin'ireo piramida dia nahitana quipu iray, kofehy sy fatotra izay natao fitaovana hitehirizana ny vaovao na hifandraisana, izay heverina ho antitra indrindra any Peroa.
Hita teny amin'ny gorodona koa ireo zavamaneno misy rivotra, kornety sy sodina, lamba miloko, akanjo, harato fanjonoana, tadin-kiraro, kiraro ary geoglyph izay mieritreritra ny hijery ny lanitra. Ny arkeology dia nilaza fa i Caral dia fonenan'ny mponina manodidina ny arivo ka hatramin'ny telo arivo, miaraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny fiaraha-monina eo amin'ny manan-kaja sy ny mpivavaka ary ny sarambabem-bahoaka. Ny sivilizasiôna dia niaina tamin'ny jono sy fambolena ary ny fikarohana dia nanondro fa nanakalo ny vokariny tamin'ny mponina hafa izy ireo, izay lasa toy ny renivohitra ara-toekarena isam-paritra.
Miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia vonona ny tsy hanadino ireo rava arkeolojika manan-danja, any Peroa, any Amerika ary manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Caral, fizahan-tany arkeolojika any Peroa
Fizahan-tany amin'ny masoandro sy amoron-dranomasina any Kolombia